warkii.com » Maxay Ahayd Digniinta La Siiyey Bruno Fernandes Ee Uu Iska Indho-tiray Iyo Kelmaddii Lagu Yidhi Solskjaer?
Maxay Ahayd Digniinta La Siiyey Bruno Fernandes Ee Uu Iska Indho-tiray Iyo Kelmaddii Lagu Yidhi Solskjaer?
Xiddiga Manchester United ee Bruno Fernandes waxa uu qaybtii hore ee kulankii ay xalay ku garaaceen Aston ku lug yeeshay arrin hore loogaga digay oo uu iska indho tiray, taas oo uu xataa tababare Ole Gunnar Solskjaer kasii hadlay.
Xiddiga reer Portugal ayaa ku guuleystay in loo dhigo rikoodhe diciif ah oo laga soo hubiyey VAR, kaas oo yimid markii uu isku dayey inuu isku kala wareejiyo kubbad uu lugta soo gelinayay Ezri Konsa, kaas oo ugu dambayntii ay soo baxday in isagu uu ku istaagay difaaca Aston Villa ee aan waxba lagu samayn.
Ciyaartii Tottenham ayaa uu Bruno Fernandes bandhig noocan oo kale ah sameeyey oo rikoodhe loogu dhigay, waxaana go’aamada VAR ay noqdeen kuwo caawiyey Fernandes.
Kulankii Tottenham kaddib, halyeygii khadka dhexe uga ciyaari jiray Liverpool ee Danny Marphy ayaa digniin u diray Bruno Fernandes, waxaanu ka dalbaday tababare Ole Gunnar Solskjaer inuu xiddigiisan ka joojiyo dhaqanka aan wanaagsanayn ee uu ku raadinayo rikoodheyaasha iyo laagga xorta ah, isla markaana uu ugu muuqanayo sidii mid istuuray.
“Bruno Fernandes wuxuu ciyaartoyga ugu wanaagsan kulankii Manchester United ay la ciyaartay Tottenham Jimcihii. Laakiin haddii aad neceb tahay istuurista oo aanad samir u hayn sidayda oo kale, waxay ahayd in loogu baaqo garsoore Jonathan Moss inuu ku dhejiyo Eric Dier kaddibna uu istuuro.” Ayuu yidhi Murphy.
“Marka laga eego dhinaca kubadda cagta, Bruno mar kale ayuu argagax sameeyey. Anigu hore ayaan u arkay tayadiisa, umanay muuqan in nasashadu ay saamayn ku yeelatay isaga, waxaanad si cad u arki karaysaa sida uu mar horeba muhiimka ugu noqday kooxdan United, isaga oo xakamaha u jiiday.” Ayuu ku daray Murphy.
Intaas kaddib waxa uu Murphy sheegay in Fernandes ay ahayd in lagu ciqaabo istuurista kulankii Spurs ee rikoodhaha loogu qabtay laakiin VAR uu ka diiday, waxaanu usoo jeediyey tababare Solskjaer inuu kala hadlo xiddigiisa dhaqanka noocan ah, waxaanu yidhi: “Kulankii Spurs, wuxuu u qalmayay in kaadh huruud ah lagu siiyo istuurista oo xataa aniga oo taageere u ah inaanan doonayn inaan arko isaga oo waxaas bilaabaya. Waxa kale oo aan hubaa in tababare Ole Gunnar Solskjaer uu kalmaddiisa ku odhanayo.”
Murphay waxa uu usoo jeediyey Fernandes in aanu mar kale samaynin istuuris, waxaanu yidhi: “Waxaan rajaynayaa inay ceeb ku noqon doonto haddii uu dib isku eego. Uma baahna inuu ku mashquulo istuurista oo uu cadowga koowaad ku noqdo sumcaddiisa. Wuxuu leeyahay karti ku filan oo uu ugu guuleysan karo ciyaaraha, kuna noqon karo geesi aan lahayn dhaqan noocaas ah.”
Si kastaba, mar kale ayuu Fernandes sameeyey ficilka looga digay, waxaanay muuqaallada kulankii xalay ay muujinayaan inuu isagu lugta kaga istaagay ciyaartoyga ay hirdamayeen, ayna ahayd in la siiyo kaadh, halka rikoodhaha looga dhigay.